စက် operated အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက် operated အပိုင်း အလှည့် actuator
စက် operated အပိုင်း အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး စက် operတစ်ဦးted အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usတစ်ဦးges.Bအဖြစ်ed အပေါ် စက်မှုလက်မှု သဘောတရား နှင့် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံ, AOX ကုမ္ပဏီ၏ ထူးခြားသော စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ် အဆိုပါ bအဖြစ်ic မောင်းနှင်မှု ဘို့ce ဘို့ အားလုံး စက် operတစ်ဦးted အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r တိုးတက်ရေး နှင့် သိပ္ပံနည်းကျသော productiအပေါ်. AOX ကုမ္ပဏီ ဖြစ် ကြီးထွားလာ သို့ တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g ကုမ္ပဏီ တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtiအပေါ် တွင်dustry နှင့် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced technology.We wဖြစ်h သို့ cooperတစ်ဦးte နှင့် သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီ တွင် အဆိုပါ neတစ်ဦးr အနာဂတ်။
AOX-မေးစီးရီးမော်တာ (AOX-Q-005/008/010 မှလွဲ. ) စိတျအပိုငျးအလှည့် actuator operated များအတွက် 2. torque switches များ
- မြေတပြင်လုံးခရီးသွားကျော်မောင်းနှင်ဆို့ရှင်များထံမှ Overload ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထံမှ actuator ကာကွယ်ပါ။
- ထို torque switching လုပ်ရပ်များနှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါ actuator ချက်ချင်းရပ်တန့်လိမ့်မည်။
AOX-မေးစီးရီးမော်တာများအတွက်နွေဦးတို့ကထောကျ 3. Indicator တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator operated
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ Outsourcing ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိခိုက်စေ, စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ equipment.It ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးမော်တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်မှနိုင်ရန်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator operated ။
AOX ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုအလွန်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာ, နှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ခိုင်ခံ့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ AOX ပြည့်စုံဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့်အများအပြားနည်းပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးမော်တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator operated ဘို့ကျနော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား, AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမည်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထုတ်သယ်။
A: ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီးမော်တာကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိစိတျအပိုငျးအလှည့် actuator operated ။
မေး: AOX-မေးစီးရီးမော်တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator operated ဘို့ငါတို့နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်မည်မျှရှိသနည်း
A: အမိန့်များ၏အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဖြန့်ဝေသည့်ရက်စွဲ 7-30 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအရေးပေါ်ထုတ်ကုန်လိုအပ်လျှင်, ငါတို့သည်ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်၏ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။
hot Tags:: စက် operated အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်